Eyona ndlela iphambili yeModyuli yeBelt yokuhambisa inkqubo kunye noMvelisi | IGOJON
Inkqubo yokuhambisa esezantsi ephezulu kunye nenkqubo yokulungisa yekhadibhodi ebunjiweyo kunye nefektri yebhokisi yebhokisi. Ngokubekwa kwesityalo sonke, isicwangciso esiliqili siyilelwe ukuhambisa ikhadibhodi ngokuzenzekelayo ukuhambisa kunye nokunciphisa amandla omntu kunye nezixhobo ezibonakalayo.
Inkqubo yokuhambisa ngokuzenzekelayo inokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zekhadibhodi edlulisiweyo ehambisa ububanzi nobude obahlukeneyo. Iqonga lokuhambisa lebhanti leemodyuli, umhambisi wombane ohamba ngemodyuli, ibhanti yemodyuli yeXY yokujika, kunye nomgca wokuhambisa ojikelezayo weZithuthi zonke zinokuyilwa ngokwembono yabathengi. Umzekelo, umenzi omnye ojolise kwimveliso yekhadibhodi, akukho mfuneko yokwenza ikhadibhodi kwakhona, kwaye ikhadibhodi inokuthunyelwa emva kokupakisha, kwaye inkqubo yolungiselelo ilula. Ukugcinwa kwephepha elikhutshiweyo kwisitaki kuhanjiswa kwiidokisi ezininzi ngokulandelelana ngemoto yombane. Abasebenzi bagcwalisa iphakheji yekhadibhodi ezibukweni. Yonke inkqubo yokuhambisa izitaki inokugqitywa ngokuzenzekelayo okanye ngesandla. Inkqubo yokuhamba ihamba kakuhle, iphakamileyo ngokufanelekileyo. Abavelisi abanamandla okushicilela kumzi-mveliso, ikhadibhodi evelisiweyo igqithiselwa ngqo kwinkqubo elandelayo yemveliso: ukusika ukusika, ukushicilela, ukunamathisela ibhokisi, ukubethelelwa kwebhokisi, kunye nokugcinwa. Ukulungiselela ukunciphisa uxinzelelo lokuhanjiswa kwepallet yamaphepha, aba bavelisi kufuneka bayile yonke imveliso yezityalo.
Inkqubo yokuhambisa iikhadibhodi ekrelekrele
1. Ukunciphisa iindleko zabasebenzi
2. Ukuqhuba umsebenzi
3. Ukwanelisa iimfuno zemveliso kunye nolawulo lweshishini langoku
Inkqubo yokuhambisa kwiZone yeBuffer
Ngokwenza kweedolo zokuthenga kunye nokuphuculwa kwesantya somgca, imowudi yokugcina ekhoyo ayinako ukwanelisa ibango lomthamo wemveliso. Nangona kunjalo, isoftware yeGOJON iyandisa kakhulu indawo yokugcina, yehlisa iindleko zothutho, iphucule ukusebenza ngokukuko, iqinisekise ukucoceka kunye nocwangco lweworkshop kwaye yenza ukuba indawo yokugcina encinci ikhuphe ixabiso elingenasiphelo.
Ukondla nokondla kwindawo yokuqhubekeka
Ukuphendula kuhlaziyo oluqhubekayo lomatshini wokushicilela kunye nomatshini wokufa, inkqubo ye-GOJON yokuhambisa isombulule iingxaki zokuphatha ukudinwa kwabantu kunye nokusebenza okuncinci kwindawo yokulungisa.
Egqithileyo Indawo enye yokuLaminetha i-Smart Line
Okulandelayo: Inkqubo yokuThuthwa kwePhepha ngokuzenzekelayo
Imodyuli yeBelt yokuhambisa
Inqwelo yokuhambisa, Ibhanki ye-Erp, Umatshini oSebenzayo wePakethe yePhepha, Indawo yokuSebenza yeWorkshop, Iinqwelo zokuhambisa iiRoller, Ifolda yephepha le-A3,